IXiaomi Mi A3: Iifoto zokuqala kunye neenkcukacha ezichaziweyo | I-Androidsis
Kudala sive amarhe malunga neXiaomi Mi A3 iiveki. Sisizukulwana sesithathu sophawu lwesiTshayina nge-Android One, ekufuneka ifike kungekudala, inokuba isemthethweni kule nyanga. Ekuqaleni konyaka kwaziwa ukuba inkampani sele isebenza kwezi modeli. Kutshanje bekukho iindaba eziveze ukuba ziya kusekelwa kwiCC9.
Malunga neeprosesa ezi fowuni ziya kuzisebenzisa kubekho amarhe kunye nokuvuza. Ngoku sinedatha entsha kwiXiaomi Mi A3. Ezinye iifoto ziye zavuza ngale fowuni, ukongeza ekubeni inezinye iinkcukacha zayo. Ke sifunda ngakumbi ngale fowuni.
Uhlobo lwalo buqinisekisa ukuba iifowuni zikhona, nangona singekayazi okwangoku ukuba iya kuziswa nini ngokusemthethweni. Kodwa i IXiaomi Mi A3 iya kusekelwa kwiCC9 esandula ukwaziswa yenkampani, nangona siza kufumana utshintsho oluthile. Ke ngekhe zibe ziifowuni ezifanayo ngokumalunga noku. Kodwa ubuncinci siyazi ukuba silindele ntoni. Uyilo luyabonakala kwisithombe esingezantsi.
Nangona kubonakala ngathi inkampani iyakwenza njalo Dibanisa iimodeli ezimbini zoluhlu lweCC9 lube lunye. Ke siya kufumana izinto kwezi zixhobo zimbini. Oku kukhokelela kwimodeli yokuhambelana okuphakathi ngokuhambelana nokusebenza.
IXiaomi Mi A3 yayiza kufika nge-6-intshi ye-AMOLED yesikrini, kunye ne-Snapdragon 665 njengeprosesa ngaphakathi. Ikhamera yangaphambili iya kuba yi-32 MP, ngelixa ikhamera ngasemva iya kuba kathathu: 48 + 8 + 2 MP kule meko. Ibhetri iya kufana, kunye nomthamo we-4.000 mAh. Ukongeza ekubeni ne-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi.
Kwelinye icala, kufuneka sikuthathe oku njengamahemuhemu. Ekubeni ukhona inokuba kukubalulwa kweXiaomi Mi A3 Lite. Ngamanye amaxesha kukhankanyiwe ukuba i-A3 izakufika iprosesa ye-Snapdragon 730, ke iya kuba yimodeli ye-premium ephakathi. Ngayiphi na imeko, akufuneki sithathe ixesha elide ukufumana okungakumbi, kuba ezi modeli ziya kuba semthethweni kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi A3: Iifoto ezivuzayo kunye neenkcukacha